ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ Aero ပိုင်းကိုဆက်လက် ယူဆောင်လာဆဲဖြစ်တဲ့ 2023 Porsche 911 GT3 RS! – MyMedia Myanmar
ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ Aero ပိုင်းကိုဆက်လက် ယူဆောင်လာဆဲဖြစ်တဲ့ 2023 Porsche 911 GT3 RS!
အခုဆိုရင်တော့ 992 မျိုးဆက် Porsche 911 GT3နဲ့ GT3Touring တို့အဆုံးသတ် သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး အကြိမ် ရေများများ စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းကောင်းနဲ့ မောင်းနှင်ချင်သူတွေအဖို့ ကတော့ပိုကြမ်းတဲ့ ကားအသစ်တစ်စီးရလာဖို့ သိပ်စောင့်ဆိုင်းရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါ ကားအသစ်ကတော့ GT3RS ဖြစ်ပြီး မကြာခင် ရောက်ရှိလာတော့မှာ ဖြစ်ကာ GT3 တုန်းကလည်း အတော်လေး ထူးခြားကောင်းမွန် အောင် လုပ်ပြထားနိုင်တာကြောင့် အခု RS Version မှာလည်း Porsche တို့ ကောင်းကောင်း စွမ်းဆောင်ပြလာဦးမယ်လို့ ယုံကြည်ရပါ တယ်။ အခု ထွက်ပေါ်ထားခဲ့တဲ့ Spy Shots တွေနဲ့ Video တွေအရတော့ Porsche ရဲ့ အကြမ်းစား ကားသစ်ဟာ လက်တွေ့ စမ်းသပ်မှုတွေ လုပ်နေပြီဖြစ်ကာ Camouflage တွေ မပါတော့မယ့် ပုံစံကိုလည်း Render တွေ ဆွဲကြည့်ကာ ပုံကြမ်းတွေ ချကြည့်လာခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကားကို ထုတ်လုပ်ရေး အဆင့်တွေ ရောက်ရှိဖို့ နီးစပ်လာလေလေ ကားရဲ့ Camouflage နည်းနည်းပဲ ပါတဲ့ နောက်ထပ် Prototype တွေပါ မြင်လာရလေဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်းအသစ်အသေးစိတ်ကို စတင်ကြည့်ရှုလို့ ရလာနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ကားသစ်မှာ အသိသာ အထင်ရှားဆုံးသော အပြောင်းအလဲတစ်ရပ်ကတော့ Hood ကို ဒီဇိုင်း ပြောင်းလဲ ထားတာ ဖြစ်ပြီး သိသာနေ တဲ့ Vents နှစ်ခု ကို Hood မှာ ထည့်သွင်း ဆန်းသစ်ထားတာပါ။ ဒါ့အပြင် အရှေ့ ဘက်နဲ့ အနောက်ဘက် Fender တွေဆီမှာလည်း Air Outlet တွေပါဝင်လာတာ ကို Camouflage အနည်းငယ် အောက်ကနေ မြင်နိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါတင်မက သေးပဲ တကယ်ကို ကြီးမားတဲ့ အရွယ်အစားနဲ့ Active Wing ကြီး ကလည်း အနောက် ဘက် ဒီဇိုင်းကို လွှမ်းမိုးထားနိုင်ကာ ထုတ်လုပ်တဲ့ အခါမှာလည်း ဒီတိုင်းပဲ ဖြစ်လာဖို့ များပါတယ်။ အရှေ့ နဲ့ အနောက် ဘက်က Bumpers တွေမှာ ဆိုရင်လည်း ပိုကြီးမားတဲ့ Air Intake တွေနဲ့အကောင်းဆုံး ပေါင်းစပ်ဖန်တီး ပေးလာတာကို တွေ့မြင်ထားရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု GT3 RS အသစ်ဟာဆိုရင် ယခင်ထက် ပိုကောင်းမွန်တဲ့ Suspensionစနစ် လည်း ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ပြီး သာမန် GT3အမျိုး အစားနဲ့ ယှဉ်ရင် ပိုကြီးတဲ့ ဘရိတ်တွေကိုလည်း တပ်ဆင်ပေးထားဦးမှာပါ။
အခု ကားအသစ်ကို ပံ့ပိုးပေးထားမယ့် အင်ဂျင်ပိုင်းကတော့ GT3 တုန်းကလိုပဲ 4.0 Liter Boxer-Six Engine ပဲ ဖြစ်လာမှာပါ။ စွမ်းဆောင် ရည် အနေနဲ့ကတော့ 502 hp နဲ့ 346 lb-ft Torque အထိ ရှိတာကို GT3 မှာ မြင်ထားရပေမယ့် အခု ပိုကောင်းတဲ့ RS Version မှာ ဆိုရင် တော့ 540 ကနေ 580 hp လောက်အထိ ကို ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ GT3မှာ တုန်းက Six-Speed Manual ဒါမှ မဟုတ် Dual-Clutch PDK Transmission စနစ် တို့ကို ရွေးချယ်ခွင့် ပေးခဲ့ ပြီး အခု RS အသစ်မှာ တော့ PDK တစ်မျိုးတည်းကို ပဲ ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်အောင် စီစဉ် ပေးလာမယ်လို့ မျှော်လင့် ရပါတယ်။ အခု Prototype ကတော့ Camo တွေ သိပ်မဖုံးအုပ် ထားတော့တဲ့ Version ဖြစ်လာတာကြောင့် အခုကားသစ်ကို နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ စတင်မိတ်ဆက်လာတော့မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အင်ဂျင်ပိုင်း အတည်ပြုပေး နိုင်ဖို့ ကိစ္စတွေတော့ လာမယ့်နှစ်လောက်မှသာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင် ပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော ကားသစ် ကားကောင်း တစ်စီးကို မြင်ရဖို့ သိပ် မစောင့် ဆိုင်းရတော့တာမို့ ရင်ခုန်စရာ ကောင်းနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
The post ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ Aero ပိုင်းကိုဆက်လက် ယူဆောင်လာဆဲဖြစ်တဲ့ 2023 Porsche 911 GT3 RS! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-08-22T12:01:10+06:30August 22nd, 2021|MYCARS MYANMAR|